Vaovao mafana (Source 97.6 FM) | GAZETY_ADALADALA
Vaovao mafana (Source 97.6 FM)
Posted on 19/02/2009 by gazetyavylavitra
Avy any Toamasina: Tanteraka ny famoriam-bahoaka nomanin’ny CRN tany an-toerana. Nisy ny fisamborana. Voasambotra tamin’izany i Tabera R..manatsoa. Raha naka sary izany rehetra izany ny mpanao gazety (Herilala Andrianaivo) avy amin’ny TV Plus dia sady niharan’ny daroky ny mpitandro filaminana no nalain’izy ireo koa ny camera fitaovam-piasany Nosamborina sy nalaina am-bavany tany niaraka tamin’ny namany iray ity mpanao gazety ity ary navoaka rehefa tamin’ny 15h 30. Nogiazana ny findain’izy ireo nandritra izany rehetra izany.
Avy eto Antananarivo: Nifamotoana teny an-kianja indray ny mpomba ny TGV. Nanao antokony telo izy ireo rehefa nihazo an’Anosy handeha haka Ministera. … Latsaka afovoany ny miaramila ary ireo vadina mpitandro filaminana nitondra sora-baventy no nialoha làlana ny mpilahatra. Tsy nisy ny poa-basy… Niala mora ireto mpitandro filaminana rehefa voahodidin’ny vahoaka. Sadaikatra ihany koa ireo milice nanao ankanjo fluo teny amin’ny ministera teny nanoloana ny hamaroan’ny olona…Vaky ny barrages roa voalohany ary eo am-panaovana negociation amin’ny barage farany ankehitriny (15h 25) ireo andaniny sy ankilany. Ny delegasiona dia nomena alalana hiditra any anaty ministera hijery izay ao, fa ny vahoaka kosa tsy maintsy mijanona aty ivelany. Nangataka moa ireto delegasion ireto ny hisian’ny mpitandro filaminana hiaraka amin’izy ireo any, saingy tsy nety ireto farany fa nilaza hoe « Efa any aminareo ny baolina…. Malalaka ny làlana… Afaka miroso ianareo »
(hafatra hitanao ihany koa ao anatin’ny tranonkalan-tserasera http://malagasymiray.net
Ministeran’ny Fanajariana ny tany
« CD ‘ilay sabotsy mihoson-drà’ Herintaona lasa tokoa mantsy izay! »